State Catabolic kunye neZakhiwo
Midlalo LezeMpilo noKhuseleko
Ukulwa neNtsholongwane: I-Frontier yokugqibela ye-Grow Muscle Growth
Ukuba ngumntu oyintlekele yomzimba. Akukho zakhiwo zomzimba okanye iinjongo zokulahlekelwa kwesisindo singafezekiswa xa zikarhulumente.
Iimeko ezinokubakho zingabangelwa ziinkalo ezininzi, ezifana nokuxinzezeleka kwengqondo, ukungabikho kokulala nokunyanzelisa, ukubiza nje ezimbalwa. Ngaphantsi kobuhlanga, i-cortisol yakho iphakama, kwaye i-cortisol inqanda ukulahlekelwa yintlungu kwaye ikhuthaza ukulahleka kwemisipha. Kungakhathaliseki ukuba uqeqesho olunzima kangakanani, ukutya ukutya okanye ukwakha umzimba, uyayidla, ukuba awuyi kunciphisa amazinga akho e-cortisol, awuyi kufezekisa nayiphi na imiphumo yomzimba.
I-Cortisol kunye nokuba yinkqubo yezobubini zizinto ezimbini ezibalulekileyo kuzo zonke izakhiwo zomzimba ukuba ziqonde ngokupheleleyo ukuze zikwazi ukufezekisa naziphi na iinjongo zokwakha umzimba.
Izihluthulelo zokunciphisa le miqathango ukuba zenzeke kukuba zihlale kwimeko eqhubekayo ye-anabolic ezokwenza ukuba umzimba wakho ukunike iziphumo ezingcono kakhulu. Oku kwenziwa ngokulandela ukutya okusemgangathweni kwamalungu omzimba kunye nokuqeqesha umzimba. Kwakhona, isongezelelo sokwakheka kwamalungu omzimba anceda ekupheliseni amathuba okuba yi- L-Glutamine , isongezelelo esivakalayo ukuba ndiziva ukuba wonke umakhi womzimba kufuneka asebenzise. Ukongezelela, ungalibali ukuba enye yeendlela ezikhawulezayo zokungena kwiimeko ezizenzekelayo kukungabikho kokulala.
Kaloku ukuba uyazi ukuba kutheni ukuhlala kwimeko engabonakaliyo, ndiya kukunika inkcazo ebalulekileyo yepropati ye-anti-catabolic term kunye namanye "kufuneka ufunde" unxibelelwano kukunceda uhlale kude kude nelizwe elinokubakho.
Iimpawu zeMimoya zeSimo esiSingayo
Indlela yokulungisa ukukhula okungafaniyo koMzimba kwiZakhiwo
5 Iingcebiso zoKhuseleko ukusetha iiAnchors eziphezulu
Imithetho eyi-10 yoTywalalifting Safety kunye nokugwema ukulimala
Jonga iRattlesnakes Xa uhamba
Ukubhukuda ukusuka kwi-Back Pain and Injury
Ukutya okunempilo: Yintoni ixabiso le-biological protein?
Indlela yokuthenga nokulungisa i-Turkey Breast and Save Money
Ngaba Ukubhukuda Indlela Eyona Ngcono Yokunciphisa Ubunzima?
Yiyiphi iVietality Reality?
Ukubamba Umzekelo Wokunyamezela (Isampula)
Kuphi na ilungelo lokuLondoloza Ubumfihlo elivela kuyo?
Ukuqonda nokusebenzisa iincwadana eDelphi
Izindlela ezahlukeneyo zokubhala incwadi A
Uluhlu lokuhlola uluhlu lweBallet
I-University of Trinitarian GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ndiyabulela njani ngesiFrentshi: Merci et Les Autres Iziqinisekiso
Umntu kunye nabasebenzi
Iingelosi zithetha njani ngeMculo
I-Hydrocarbon Definition kunye nemizekelo
Robert Boyle Biography (1627 - 1691)
Isiqulatho sesishwankathelo sika-Arthur Miller sika-"All My My" Act Two
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: iPassare
Imibuzo yokubulela yoMthendeleko Omkhulu
Funda indlela yokusebenzisa kuyo, i-An okanye i-Auf ngokufanelekileyo kwisiJamani
Indlela yokudlula iKlasi yeKholeji
I-Petrarca: Uthando lweSonnets e-Italy kunye noLuthando lweengqungquthela
Indlela yokufumana iincophiso zeeNkxaso zeSikolo seGreyd